Rosiana anglisy avy amin'i David Austin: famaritana karazana misy anarana sy sary - Famokarana voankazo - 2019
Rosiana anglisy: famaritana sy sarin'ireo solontenan'i David Austin tsara indrindra
Ny rosia anglisy dia niseho tamin'ny alàlan'ny mpahay siansa britanika David Austin tamin'ny taompolo 80 tamin'ny taon-jato lasa teo tamin'ny famakivakony raozy miaraka amin'ireo vondron-taolam-paty maoderina sy voninkazo avy amin'ny tarika Floribunda. Ity sendikà goavana ity dia namela ireo mpanjakavavy Anglisy handray voninkazo manaraka tombontsoa:
dian-tongotra lava lava - hatramin'ny 4 volana;
Miparitaka manerana ny kirihitra ny firavaka.
Eritrereto ireo karazana raozy malaza indrindra amin'ny anaran'ny raozy anglisy miaraka amin'ny anarana sy ny famaritana amin'ny antsipiriany ny karazany tsirairay.
Natomboka tamin'ny taona 1998. Ny diametr'ilay voninkazo dia tonga 12 santimetatra, ny halavan'ny loko dia avy amin'ny loko mavokely amin'ny peach. Misy voninkazo 40 mahery ny voninkazo iray.
Ny firavaka dia voangona ao anaty vondrona marevaka vitsivitsy izay manohitra ny orana. Ny voninkazo roa vita amin'ny voninkazo dia nomena fofona mahery. Ny vary maro dia maro, lava sy be dia be. Mivelatra haingana ny kirihitr'ala. Ny halavin'ny toeram-piompiana lehibe iray dia mahatratra 1,5 m.
Rehefa mihalehibe any amin'ny tany an-tanànan'i William Morris dia maneho ny fanoherana tsara amin'ny fikorontanan'ny toetr'andro sy ny aretina maro ny raozy, ary koa ny fampifanarahana tsara amin'ny toerana samihafa. Ny karazany dia mila fiakarana tsy tapaka, fisakafoanana amin'ny felam-boninkazo marefo, ary ny sisa amin'ireo voninkazo - raozy tsy mendrika sy ireo karazana tsara indrindra raha oharina amin'ny hafa.
Zava-dehibe izany! Noho ny toetran'ny rivotra nogadrain'i Albion, ny voninkazo amin'ny karazana anglisy dia mangataka mangatsiaka sy miaraka amin'ny molotra. Ho an'ny fampandrosoana ara-dalàna sy ny fiainana dia ampy ny ora fiasan'ny masoandro manontolo andro isan'andro.
Natomboka tamin'ny 2001. Nantsoina taorian'ny mpihira Anglisy Benjamin Britten. Ny karazana voninkazo dia tsy mahazatra amin'io karazana io, satria manana loko mena miaraka amin'ny lokon'antony.
Ny tsimok'aretina tsikelikely dia manokatra, mamorona voninkazo vita amin'ny kaopy miaraka amin'ny diametre miakatra hatramin'ny 11 cm, no manangona na manangona amin'ny felam-bolo madinika.
Ny voninkazo dia omena mihoatra ny 50 petals tsirairay. Benjamin Britten dia manana fofona matanjaka amin'ny taratasy mani-pofona sy ny fametahana divay, mitombo indimy isan-taona ny voninkazo. Ny raozan'i David Austin ao amin'io karazana vary io dia maniry any amin'ny tendron'ny sampana iray ka hatramin'ny 1,3 m ambony miaraka amin'ireo sampana tsara tarehy izay mifamatotra. Ny fambolena, ny fikarakarana ary ny fanoherana ny aretina dia tsy mitovy amin'ny karazany hafa amin'io karazana io.
Vakio koa ny fambolena karazana raozy hafa: "Floribunda" sy "Double Delight".
Natomboka tamin'ny 1985. Ny toetra mampiavaka indrindra dia ny endriky ny voninkazo. Ny voninkazo dia mamolavola voninkazo tsara tarehy, raha ny hafa kosa dia mihetsiketsika kely sy kely kokoa noho ny hafa. Ny voninkazo lehibe hatramin'ny 10 santimetatra eo ho eo dia manana loko mavomavo mafana ao afovoan-trano ary mavokely eny amin'ny sisiny.
Vola vita amin'ny voninkazo roa matevina ary mamoaka fofona malefaka menaka. James Galway dia manana kirihitra misy sampana mahazatra lavitra, izay tsy misy tsilo intsony. Ny haavony dia afaka hahatratra 1,5 m ny haavony. Ny fahasamihafana dia miorina amin'ny aretina ary mamelana in-droa isan-kerinandro amin'ny faramparan'ny fararano.
Hanamboatra ny saha zaridainanao hanampy: mihanika, manaloka sy mamimbony raozy.
Navoaka tamin'ny taona 2000. Voninkazo tsara ho an'ny loko pastel. Ny tsiranoka kely (hatramin'ny 10 cm) dia voahodina amin'ny endriny, mihosotra manodidina ny tokotany manontolo ary voasarona amin'ny alokaloka fotsy na fotsy madio.
Ny voninkazo dia voangona ao anaty famonoana kely ary atolotra azy amin'ny fofona malefaka. Crocus Rose dia karazana varim-piterahana indray. Ny tohatra dia mamboly amin'ny toerana mangatsiatsiaka. Ankoatra izany, mila manongotra sy mamahana ny fotoana izy ireo.
Ny karakaravan'io karazany io dia somary mihetsiketsika, ny haavon'ny zavamaniry lehibe iray dia mahatratra 1,2 metatra. Ny endrika mahafinaritra dia tratra noho ny tifitra biriky. Ny raozan'i Austin amin'io karazana io dia manohitra ny hatsiaka sy ny orana. Ny fitsaboana manokana dia hanampy amin'ny fanafahana aretina azo tsapain-tanana.
Fantatrao ve? Anglisy Roses - karazan'ity voninkazo ity, ny tantsaha David Austin sy ny namany Graham Thomas dia nanampy izao tontolo izao rehefa navoaka ny volombolon'i Constance Spry tamin'ny 1961 ary nanomboka io karazana io.
Navoaka tamin'ny 1992. Misaotra ny lokony, ny Golden Celebration Rose dia mamirapiratra amin'ny volamena ary mijery tsara tsy ao amin'ny zaridaina, fa amin'ny fehezam-boninkazo ihany koa. Ny fijery dia nahazo loka maro be tamin'ny sokajy samihafa.
Ny voninkazo dia mitombo hatramin'ny 16 cm. Mamela kely tsikelikely ny tsinay ary mamela anao hankafy ny raozy mandritra ny fotoana maharitra amin'ny voninahitra rehetra.
Ny voninkazo dia manana fotoana fambolena voninkazo, manome ny fofona vaovao ny zaridaina. Ho an'ny katsaka dia tokony hambolena eny amin'ny havoana iray miaraka amin'ny fisian'ny hazavana ampy. Ny haavon'ny raviny dia 1,5 metatra. Tahaka ireo karazany teo aloha, ireo raozy avy any David Austin dia manana ny fihenan-danjan'ny aretina avo lenta ary ny karazam-bolo indrindra amin'ny ririnina.
Ho an'ny fitomboana tsara sy ny felam-boninkazo raozy dia mila mahafantatra ianao rehefa hamboly (amin'ny lohataona na fararano), inona no tokony hanomezana sakafo, akanjo ary miomana amin'ny ririnina.
Navoaka tamin'ny 1999 tany Alemaina. Io zaridaina anglisy io dia natsangana ho an'ny fitsingerenan'ny Goethe ary manana ny karazana karazana karazam-pankasitrahana indrindra eran-tany.
Vovobony maitso matevina amin'ny haben'ny haavon'ny loko sy ny endriky ny endrika fanovozan-javatra arakaraka ny toetr'andro avy amin'ny divay rose sy champagne. Ny hazo dia manana 40 petals. Mamelatra indray ny aroma matavy. Ny kirihitra dia mety amin'ny habeny samihafa - hatramin'ny 70 cm ka hatramin'ny 1.2 m avo. Izy io dia omena avo lenta amin'ny fanoherana ny hafanana sy ny aretina.
Augusta Luise dia misy endri-javatra sasany rehefa misafidy tranokala sy manomana ny tany, izay aseho amin'ny famaritana. Samy tia ny hazavana, mila mahafantatra ianao rehefa mifidy toerana. Mandritra ny vanin-taona mahamay dia ilaina ny manapaka tsy tapaka ny felam-boninkazo marefo sy mampiroborobo ny fandrosoana.
Zava-dehibe izany! Ny karazany amin'ny teny anglisy dia mila mangovitra kely rehefa avy ny orana, vita izany mba tsy hikolokolo ny tsimokaretina ary tsy hamolavola ny bozaka maitso. Rehefa hita ny lesoka iray, dia ilaina ny manala ny faritra malemy amin'ny fotoana mety indrindra ho an'ny voa voajanahary voalohany.
Natomboka tamin'ny 1983. Ny Rosiana anglisy an'io karazana io no malaza indrindra amin'ny loko ary iray amin'ireo karazan'I Austin, izay asongadin'ny Royal National Rose Society.
Graham Thomas izay manana loko mavokely madio, na dia misy loko samihafa aza - avy amin'ny jiro mamiratra ary mampiroborobo ny teny anglisy izany. Ny voninkazo amin'ny endriny dia mitovy amin'ny kaopy ary miaraka amin'ny fofona dite. Ny tahony, ny haben'ny 10 santimetatra, dia voaangona ao amin'ny borosy. Ny tsimok'aretina tsirairay dia manana fivalanana maherin'ny 70, ary ny fanehoana feno ny mpanjakavavy dia toa mahafinaritra kokoa.
Ny karazam-borona tsara tarehy dia miloko mandritra ny fahavaratra. Ao amin'ny klima mangatsiaka dia mitombo ho 1,5 metatra ny tifitra, ary amin'ny tany mafana dia maherin'ny avo roa heny. Ny fikarakarana tsara dia ny fisorohana amin'ny fotoana. Ny karazany dia manana fanoherana goavana amin'ny aretina isan-karazany.
Fantaro ny habetsaky ny dite mitombo, raozy kanadiana, mipoitra (rose rose) ary mallow (stem-rose).
Natomboka tamin'ny 1991. Ny "Pilgrim" dia karazana raozy izay azo avy amin'ny fiampitana an'i Graham Thomas sy ny bokotra mavo. Ny ivon-toerana mavo sy ny felana fotsy fotsy dia mifanentana amin'ny voninkazo, izay vokatr'izany dia mamorona ny famirapiratan'ny glow.
Ny voninkazo dia manana 8 cm ny haben'ny felany. Ny felany dia mifangaro tanteraka amin'ny rosette, izay efa ela be. Ny fofona dia mampahatsiahy ny ranom-boankazo sy ny miora. Ny bushes dia mahitsy ary mangarahara amin'ny tarehy, mitombo hatramin'ny 1,5 metatra ary mitafy lelavola mahery sy volom-borona manintona. Rose English "Pilgrim" dia manohitra ny hafanana sy ny aretina mihoatra ny salanisa.
Fantatrao ve? Nahitana fôsily fôsily sy fôsily raozy, izay manondro ny taonany eo amin'ny 50 tapitrisa taona eo ho eo. Ny Rose dia 5000 taona eo ho eo, ankehitriny dia misy 300 ny karazana raozy, manodidina ny karazany 30.000.
Navoaka tamin'ny taona 2002. Ny Rose of Spirit ny Fahalalahana dia mamony amin'ny voninkazo tsara tarehy, mivangongo ao anaty kofehy marevaka mena mavokely, indraindray miaraka amin'ny alokaloka lava.
Ny fofona raozy dia manangona ireo fanamarihana matanjaka amin'ny menaka rose sy ny salvus citrus ary tsy mandeha mandritra ny voninkazo.
Ny mampiavaka ity karazana vary ity dia rehefa aorian'ny orana, dia mianjera ny tsimok'aretina ary tsy mitsangana velively. Ny kirihitra dia afaka mitombo hatramin'ny 2,5 m ary mila manongotra hazavana. Rehefa mividy zana-ketsa maromaro amin'io karazana io ianao dia mila mandinika ny fanoritsoritana an'io karazana io.
Natomboka tamin'ny 1985. Ny zaridaina rosiana Anglisy amin'ity karazany ity dia tsy manan-tsahala, satria voavolavola izy rehefa mandalo karazana maoderina. Ny felam-boninkazo dia tandindom-borona mahazatra, varim-bolo-kavina ao afovoan-tanàna ary misy felana mavokely eo amin'ny sisiny.
Ny voninkazo dia be dia be, avo roa heny noho ny habeny, ka hatramin'ny 15 santimetatra eo ho eo, indraindray ireo ahidrano maina amin'ny voninkazo, mety ho tokan-tena izy ireo na mamorona lolo kely kely. Manomboka aloha kokoa ny voninkazo raha oharina amin'ny an'ny hafa ary mandalo amin'ny onja izay mamerina amin'ny tsy fitoviana. Ny aroma dia matavy fruity, miaraka amin'ny tsotsotra kely amin'ny trondron-dranomamy.
Abraham Darby dia manamboatra kirihitra mihodinkodina, mandritra ny voninkazo dia rakotra voninkazo. Noho ny haavony, ny karazany dia ampiasaina amin'ny riandrano miakatra na toy ny fefy. Ny fanoherana ny aretina sy ny fiovan'ny hafanana dia avo.
Zava-dehibe izany! Mba hisorohana ny filana maranitra fotsiny, raha amin'ity tranga ity dia tsy ho ratra ny tifitra. Ny dingana vita amin'ny 45 degre. Azo atao ny manosotra ireo faritra voaova amin'ny saha.
Ireo raozy anglisy dia azo jerena ao amin'ny catalogana rehetra, ary ny fahafantaran'izy ireo ny asany, ny tsirairay dia afaka misafidy ny tsara indrindra tsy misy olana.
Copyright 2019 \_ Tantsaha anaty aterneto \_ Rosiana anglisy: famaritana sy sarin'ireo solontenan'i David Austin tsara indrindra